Muusikada Apple ee ardayda waxay kordhisay mudada tijaabada ilaa 6 bilood | Wararka IPhone
Marka loo eego xogta rasmiga ah ee rasmiga ah ee ay bixisay Apple lafteeda, adeegga muusigga ee qulqulaya ee Apple ayaa ka badan 60 milyan oo macaamiil ah, dhammaantoodna waa la bixiyay tan iyo markii loo eego Spotify, Apple ma bixiso nooc bilaash ah oo ah adeegga muusikada qulqulka. Xogta ugu dambeysay ee laga helay Spotify, dhowr bilood ka hor, ayaa sheegaysa ka badan 100 milyan oo macaamiil ah.
Dalka Mareykanka, Apple Music wuxuu dhaafay Spotify dhowr bilood ka hor, in kasta oo si la yaab leh ugu filan, haddana ma ahan adeegga ugu badan ee muusigga loo adeegsado. Si loo isku dayo in loo xoqo macaamiisha inta kale ee barnaamijyada, gaar ahaan qaybta waxbarashada, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa ku dhawaaqday wuxuu laba jibaaraa mudada tijaabada ee ardayda iska diiwaangelisa Apple Music, sida uu sheegay iMore.
Qiimaha bil kasta ee rukunka Apple Music waa 9,99 euro / dollars. Haddii aad tahay arday oo xaruntaada waxbarasho waxay ku dhex jirtaa barnaamijka ardayda ee UNiDAYS, khidmadda ayaa laga dhigay kala badh, 4,99 euro / dollars. Illaa iyo hadda, muddada tijaabada ee nooca ardaygu wuxuu ahaa 3 bilood, si kastaba ha ahaatee laga bilaabo hadda, muddadaas waxay labanlaabaysaa 6 bilood.
Dalabkan Kaliya waxay ku ansaxan tahay dhamaan isticmaaleyaasha aan horay qandaraaska ula galin adeegga muusikada ee Apple waxayna ku biiraysaa barnaamijka ay Apple abuurto sanad walba si ay ugu soo noqoshada ardayda fasalku xoogaa uga jaban tahay, iyadoo ay ugu wacan tahay qiima dhimista xiisaha leh ee ay diyaarineyso.
Ma ogin ilaa goorta la heli doono dalabkan laakiin waxay u badan tahay inay sidaas sameyn doonto ilaa bilowga Sebtember, si looga faa'iideysto dib u soo noqoshada dugsiga, markaa haddii aad ka fekeraysay inaad tijaabiso Apple Music oo aad tahay arday, wax yar ama waxba kuma lumin .
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple Music ee ardayda waxay kordhinayaan mudada tijaabada ilaa 6 bilood
Shaqaale badan oo ka tirsan Apple Health ayaa ka tagaya shirkadda